Sheeg todobadii asaxaabi ugubadnaan ka wariyay xadiisRasuulka
Akhristow waxaa hubaal ah inaad taqaanid saxaabiga xiddiga ah ee ka mid ahaa asxaabtii Rasuulka (scw). Aynu isweydiinee ma ummadda Islaamka ayaa waxaa ku jira ruux aanan aqoonin Abuu Hureyra?!. Dadku waxay ugu yeeri jireen xilligii Jaahiliga (Islaamka kahor) Cabdi Shams, hase ahaatee markii uu Ilaah ku maamuusay diinta Islaamka, ee uu soo islaamay, kuna sharfay la kulankii Nebiga (scw) ayaa wuxuu Rasuulku weydiiyay su aashan: Magacaa?. Wuxuu yiri magacygu waa Cabdi Shams. Nebiga (scw) ayaa ku yiri, maya ee waxaa lagu yiraahdaa Cabdiraxmaan. Wuxuu yiri, haye oo magacaygu waa Cabdiraxmaan, aabahay iyo hooyaday ha lagugu furtee Rasuulkii Alloow. Wixii maalintaas ka danbeeyay wuxuu magaciisu ahaa Cabdiraxmaan, aabihiisna Sakhr. Waxay dadka ugu kunyooni jireen Abuu Hureyra, sababta loogu baxshayna waxay ahayd, markii uu yaraa ayaa wuxuu lahaa bisad yar, taasoo uu jeclaan jiray inuu la cayaaro. Wiilashii ay isku dada ahaayeen ayaa wixii maalintaa ka danbeeyay waxay ugu yeeri jiray Abuu Hureyra, kunyadaas (abuu hureyra) ayuu markii danbe ku caan baxay.
Islaamiddii Abuu Hureyra[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Abuu Hureyra Allaha ka raalli noqdee wuxuu ku soo islaamay gacantii Dhufeyl Binu Camar Al-dowsi, isagoo intaa wixii ka danbeeyay dhex joogay tolkiisa reer Daws jeer laga soo gaaro sannadkii lixaad hijriyada kadib, halkaasoo uu u soo wafdiyay Rasuulka (scw) oo joogay magaallada Madiina, wuxuuna la socday qaar ka mid ah tolkiisa oo iyaguna soo islaamay. Abuu Hureyra wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo u goay u-adeegidda iyo la-jirka Rasuulka (scw). Fadhigiisa iyo deggaankiisu wuxuu ahaa masjidka, Nebigana (scw) wuxuu ka dhigtay bare iyo hoggaamiye, mana uusan lahayn xilligaas reer ama caruur.
Sidii uu ugu baari fali jiray hooyadiis oo gaal ahayd[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Abuu Hureyra wuxuu la noolaa hooyadiis oo waayeel ahayd, taasoo ku adkeysatay shirkiga iyo gaalnimada. Inkasta oo ay gaal ahayd, haddana Abuu Hureyra ma uusan ka noogi jirin inuu u duceeyo, wuu u cabsan jiray, wuuna u baari fali jiray markasta, hase ahaatee iyadu way ka carari jirtay. Way ka tagi jirtay, iyadoo walbahaarka Abuu Hureyra uu ka walbahaarayo hooyadiis ay buuxinayso laabtiisa. Abuu Hureyra wuxuu yiri, maalin maalmaha ka mid ah ayaan hooyaday ugu yeeray diinta islaamka, markaasay waxay Nebiga (scw) ku sheegtay hadal aan dhibsaday, ina dhaawacay. Wuxuu aaday Rasuulka (scw) isagoo oonaya. Rasuulka (scw) ayaa ku yiri: maxaa kaa oohinaya. Wuxuu yiri, waxaan ahaa mid aan ka noogin yeerista aan hooyaday ugu yeerayo islaamka, halka iyaduna ay diidi jirtay inay soo islaamto. Hase ahaatee, maanta ayaa waxaan ugu yeeray inay soo islaamto, dabadeedna waxaan xaggaaga ka maqlay wax aan dhibsado, ee Rasuulkii Alloow waxaad Ilaah uga baridaa inuu laabteeda islaamka soo aaddiyo. Nebiga (scw) ayaa u duceeyay Abuu Hureyra hooyadiis. Wuxuu yiri Abuu Hureyra: waxaan ku dhaqaajiyay guriga, markii aan u soo dhowaaday guriga ayaa waxaan maqlay dhawaaq sida biyo daadanaya oo kale, markii aan damcay inaan gurigii galana waxay hooyaday igu tiri: joogso meeshaada, dabadeedna waxay xiratay dharkeedii ka dibna waxay tiri soo gal, markii aan gudaha guriga soo galayna waxay hooyaday tiri: waxaan qirayaa jiritaanka Allaha xaqa ah, waxaan kaloo qirayaa inuu Muxammad yahay addoonkii iyo Rasuulkii Alle. Waxaan ku laabtay Rasuulka (scw), annigoo farxad awgeed la oonaya sidii saacad ka horeba aan murugo darteed ula ooyay, annigoo markaas ku leh Rasuulka: bishaarayso Rasuulkii Alloow, Ilaah wuu aqbalay ducadaadii oo wuxuu Alle (sw) hanuuniyay Abuu Hureyra hooyadiis.
Jeceylkii Abuu Hureyra ee Nebiga (scw)[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa mahad iska leh Allihii Abuu Hureyra baray quraanka.
Nebiga (scw) ayaa ugu duceeyay cilmiga[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa sheekeeyay Zeyd Binu Thaabit Ilaah ha ka raalli noqdee, wuxuuna yiri: goor aan anniga iyo Abuu Hureyra iyo nin aynu saaxiibo ahayn aan joogno masjidka welibana aynu Alle baryayno, xusaynana Alle ayaa waxaa nagu soo baxay Rasuulka Alle (scw) ilaa uu dhexdeena fariisto, dabadeedna waynu aamusnay. Nebiga (scw) ayaa nagu yiri, hadalkii aad wadateen u noqda . Anniga iyo saaxiibkay ayaa waxaynu barinay Alle (sw) -kahor Abu Hureyra intuusan baryin markaas iyada ahna uu Rasuulka noo aamiinsanayo (leeyahay aamiin). Haddana, waxaa Alle baryay Abuu Hureyra isagoo leh: Allahayoow waxaan ku weydiisanayaa waxa ay ku weydiisteen labadayda saaxiib.. Waxaan ku weydiisanayaa cilmi aan la hilmaamin Nebiga (scw) ayaa yiri: aamiin. Annagana waxaynu markale niri: Ilaahayow annagana waxaan ku weydiisanaynaa cilmi aan la hilmaamin. Nebiga (scw) ayaa ku yiri: waxaa idinkaga hormaray wiilkii reer Daws ahaa (Abuu Hureyra).
Siduu Abuu Hureyra uu naftiisa ula jeclaa barashada cilmiga, ayuu misna ula jeclaa dadka inay weyneeyaan cilmiga. Taasina waxaan ku arki doonaa dhacdadan soo socota. Abuu Hureyra ayaa maalin maalmaha ka mid ah soo maray suuqa magaallada Madiina, wuxuu arkay inay dadkii ku shuqloomeen adduunyo, wuxuu arkay inay ku mashquuleen bicsharada iibka, gadista, siinta iyo qaadashada. In yar ayuu dadkii is dul istaagay, dabadeedna wuxuu dadkii ku yiri: Yaa idinka tabar daran haddaad tihiin reer Madiinoow!!. Waxay yiraahdeen, ma waxaad aragtay kuwanaga tabarta daran Abuu Hureyrow. Wuxuu yiri, waxaa la qaybsanayaa dhaxalkii Nebiga (scw), idinkana waxaad fadhidaan halkan..! War miyeydaan tagaynin oo soo qaadanaynin qaybtiinii!! Waxay yiraahdeen waa halkee?!. Wuxuu yiri: masjidka. Dadkii ayaa u deg-deggay masjidka, Abuu Hureyrana iyaga ayuu sugay ilaa ay ka soo laabteen. Markii ay u yimaadeen, ayaa waxay ku yiraahdeen: Abuu Hureyra, waxaynu aadnay masjidkii mana aanan arag wax lagu qaybsanayay masjidka. Wuxuu ku yiri, miyeydan masjidka ku arag wax dad ah?!. Waxay yiraahdeen: haa.., waa run oo waxaynu aragnay dad tukanayay, dad aqrisanayay quraanka iyo kuwo kale oo baranayay cilmiga la xidhiidha xalaasha iyo xaaraanta. Wuxuu yiri, haddaba taas ayaa ah dhaxalkii Nebiga (scw) PR umu bariiira.
Faqrigii iyo gaajadii uu la kulmay Abuu hureyra[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dhibaatooyin fara badan ayuu Abuu Hureyra kala kulmay barashada cilmiga diinta iyo u goidda fadhiyada Rasuulka (scw), taasoo aynan jirin qof sidiisoo kale ah. Abuu Hureyra oo arrintan ka sheekeenaya wuxuu yiri: waxaa dhici jirtay inay gaajada i haysa igu adkaato jeer aan ka noqdo mid asxaabta ka weydiiyo aayad quraan ah -markaasna aan ogahay macnaha aayadda- waxa aan u weydiinayo waa inuu ii wado gurigiisa oo uu i soo siiyo cunto. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gaajadii i haysay igu adkaatay, markaas ayaa waxaan caloosha ku xiray dhagax, waxaana fariistay waddada dhexdeeda. Waxaa waddadii soo maray Abuubakar (rc) waxaana weydiiyay aayad quraan ah, sababta aan u weydiinayana waa inuu gurigiisa ii kaxeeyo, mana ii kaxeynin. Intaa ka dib, waxaa haddana waddada soo maray Cumar Binu Al-khaddaab (rc), waxaan weydiiyay aayad quraan ah, isna iima yeerin jeer uu markii danbe ka soo maro Rasuulka (scw), wuxuu gartay gaajada i haysa wuxuuna yiri: Ma Abuu Hureyraa? Waxaan iri, haa, waana ku ajiibay Rasuulkii Alloow, ka dibna waan raacay, waxaana annigoo la socdo galnay gurigiisa. Wuxuu Nebiga (scw) guriga ka helay weel caano ku jireen, markaas ayuu reerkiisa ku yiri: intee ayuu nooga yimid kani. Waxay yiraahdeen, waxaa kuu soo diray hebel. Wuxuu yiri, Abuu Hureyroow waxaad u yeertaa jamaacadii la oran jiray Ahlu-Sufa (waxay ahaayeen dad masaakiin ah, kuwaasoo aan lahayn reer iyo caruur iyo hoy midna, waxayna seexan jirayn masjidka Nebiga). Waxaa i dhibtay inaan Ahlu-Sufa ugu yeero weelkan yar ee caanaha ku jira, waxaana naftayda ku iri: Sidee ayeey u deeqaysaa Ahlu-Sufa weelkan yar?!. Waxaan filayay inaan hal mar dhamo caanahan si aan ugu xoogeysto, deedna aan iyaga u aado. Waxaan u imid Ahlu-Sufa, waxaana aan ugu yeeray weelkii caanaha ku jireen. Hal mar ayeey yimaadeen, markii ay soo ag fariisteen Rasuulka ayaa wuxuu igu yiri: intaad qaadid u gee iyaga. Waxaan bilaabay inaan mid mid u siiyo caanihii ilaa ay dhammaantood caanihii ka dhamaan, weelkiina waxaan u celiyay Rasuulka (scw). Nebiga (scw) ayaa madaxiisa kor u qaaday isagoo muusoonaya, wuxuuna yiri: waxaa haray anniga iyo adiga. Waxaan iri, run baad sheegtay Rasuulkii Alloow. Wuxuu yiri, haddaba, cab caanaha, waana cabay. Markale ayuu igu yiri, cab, haddana waan cabay. Rasuulka (scw) kama uusan suulin kii yiraahda cab, anniguna aan cabbayo caanihii ilaa markii danbe aan ka iraahdo: Ilaahii xaqa kugu saaray waxaan kuu dhaaranayaa inaanan awoodin inaan sii cabo.. Wuxuu qaaday weelkii, dabadeedna wuxuu cabbay suubbanaha Nebiga (scw) caanihii soo haray.
waxaan ku barbaaray agoonimo, waxaan guuray oo hijrooday annigoo miskiin ah, waxaan shaqaale ka ahaa beer ay lahayd ina Qazwan annigoo ugu shaqeyn jiray si calooshii ugu shaqeystinimo ah, waxaan ahaa kii u adeega reerka markay soo deggaan, ratiga ayaan u kaxeyn jiray, Ilaahayna wuxuu ii sahlay inaan ka guursado shaqadii beertaas. Waxaa mahad iska leh Allaha diinta islaamka nidaam nooga dhigay, Abuu Hureyrana ka dhigay hoggaamiye. Abuu Hureyra wuxuu madax ka noqday magaallada Madiina, isagoo ka socda dowladdii Mucaawiye Binu Abii Sufwaan (rc) wax ka badan hal jeer, madaxtinimadaas uu noqday Abuu Hureyra ma aynan beddelin dabeecaddiisii.
Wuxuu ku tilmaanaa tilmaamo suubban[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Illaah ha ka raalli noqdee wuxuu Abuu Hureyra kulansaday cilmi xeel dheer, cafis iyo saamixitaan badan, Alle ka cabsi iyo xalaal-miiradnimo. Wuxuu ahaa kii sooma maalintii, halka habeenkii qayb uu ka tukan jiray salaatul-leylka. Wuxuu salaadda u toosin jiray reerkiisa habeenka saqda dhexe, habeenka intiisa danbena wuxuu salaadda u toosin jiray gabadhiisa. Guriga Abuu Hureyra wuxuu ahaa kii aan laga-kala-goyn cibaadada habeenkii oo dhan. Abuu Hureyra waxaa u shaqeyn jirtay gabar madoow ah, gabadhii ayaa waxay u gaftay maalin Abuu Hureyra, dabadeedna wuu istaagay, wuxuuna soo qaatay jeedal si uu markaa ugu garaaco gabadha. Haddana wuu is qabtay isagoo gabadhii ku leh: haddii aynan jirin qisaas maalinta qiyaame waan ku xanuujin lahaa sida aad noo dhaawacdayba, hase ahaatee waxaan kaa iibinayaa qof i siiya qiimahaaga, waqtigaasna aan aad ugu baahanahay Iska tag, Alle dartii ayaan kuu xoreeyee.. Abuu Hureyra cabsidiisa Alle ayaa waxaa wehelisay adduunyo naceyb, wuxuu sida badan ku dadaali jiray u-camal -falka maalinta aakhiro, sidaa darteed wuxuu markasta ka wel-weli jiray cadaabta iyo xanuunka ay wadato naarta. Maalin ayaa gabadhiisii waxay ku tiri, aabe gabdhaha saaxiibadayda ah way i caayaan, waxayna igu yiraahdaan: muxuu aabahaa kuugu gadi waayey dahab?!. Wuxuu ku yiri, gabadhaydiiyey, waxaad ku tiraahdaa: aabahay wuxuu iiga cabsanayaa kulka naarta Jahannamo. Diidmada uu Abuu Hureyra gabadhiisa dahabka ugu diidayay kama ahayn bakheylnimo awgeed, maxaa yeelay wuxuu Abuu hureyra ku tilmaanaa deeqsinimo iyo gacmo furnaan, gaar ahaan xilliga jidka Alle loo duulayo. Marwaan Binu Al-Xakam ayaa wuxuu Abuu Hureyra u soo diray boqol diinaar oo dahab ah, maalintii kale markii la gaaray ayaa wuxuu u qoray warqad uu ku leeyahay sidatan: khaadimkaygii wuu qaldamay oo wuxuu ku siiyay lacago diinaar ah, annigana kulama aanan doonin, ee waxaan u doonayay qof aanan adiga ahayn. Abuu Hureyra arrintii wuu ka qoomameeyay, wuxuuna yiri: waxaan lacagta u bixiyay si jidka Alle ah, markuu mushaarkayga yimaado ka qaado lacagta. Hase ahaatee, waxay Marwaan ka ahayd oo keliya inuu imtixaano Abu Hureyra, markii uu arrinkii u fiirsadayna wuxuu oggaaday inuu sax yahay hadalkiisii.
Hal meel ma wada harsanayno anniga iyo kan qaraabadiisa gooya[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Abuu Hureyra wuxuu weligiis baarri u ahaa hooyadiis, mar alla markuu guriga ka baxayana intuu istaago iridka aqalka ayaa wuxuu oran jiray: salaan iyo nabad gelyo korkaada ha ahaato hooyo Iyaduna waxay ugu jawaabaysay: adigana sidoo kale dushaada ha ahaato naxariistii iyo barakaatkii Alle. Wuxuu haddana ku yiri: Allaha kuugu naxariisto sidii aad annigoo yar igu soo barbaarisay. Waxay haddana ku tiri: Allaha kuugu naxariisto sidii aad annigoo weyn iigu baarri-fashay. Markuu guriga ku soo laabtana wuxuu oran jiray hadalladaas oo kale.
Wuxuu Abuu Hureyra ku dadaali jiray inuu dadka ugu yeero sidii ay ugu baari-fali lahaayeen waalidiintooda, iyo xiriirinta qaraabadooda. Waxaa hadalladiisa ka mid ahaa hadalkan: "hal meel ma wada harsanayno anniga iyo kan qaraabadiisa gooya". Wuxuu maalin maalmaha ka mid ah arkay labo nin oo wada socda, oo kala da weyn. Wuxuu kii yaraa weydiiyay waxa uu kan kale u yahay, wuxuuna ku yiri: waa aabahay. Haddaba wuxuu Abu Hureyra ninkii ku yiri: magaciisa ha ugu yeerin, hortiisana ha socon, hana fariisan hortiisa.
Markii uu Abuu Hureyra xanuunsaday bukaankii dhimashadiisa ayaa uu ooyay, waxaana lagu yiri maxaad la ooyaysaa?. Wuxuu yiri, lama oynayo cabsida aan ka qabo dunidan tan ah, hase ahaatee waxaan la ooyay safarka dheer ee i sugayo, iyo saadka iyo sahayda yari ee aan wato. Waxaan istaagay dhammeystirka waddo, taasoo ii sii kaxeynaysa Janno ama Naar, mana ogi labadaas meelood meesha aan ku danbeyn doono. Waxaa Abuu Hureyra soo booqday Marwaan Binu Al-Xakam, isagoo ku leh: Abuu Hureyrow Allaha ku shaafiyo. Wuxuu Abuu Hureyra ku Alla baryay ducadan, wuxuuna yiri: Illaahayow waxaan jeclahay la-kulankaaga ee waxaad adiga jecaataa la kulankayga, iina soo deddeji inaan kula kulmo". Maba uusan Marwan ka bixin gurigii jeer uu ka geeriyoodo Abuu Hureyra. Illaah ha u naxariisto Abu Hureyra raxmad waasic ah, wuxuu ummadda muslimiinta u xafiday wax ka badan kun iyo lix boqol iyo sagaal xaddiis kana mid ah axaadiista Rasuulka (scw), Ilaahay Islaamka iyo Muslimiinta ha uga jazeeyo kheyr, aamiin PR umu bariira.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Hurayra&oldid=231463"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Febraayo 2022, marka ee eheed 10:25.